Autocad 2010 (မြန်မာ)
autocad သမားများအတွက်ပါ . 2010 version ကို သုံးပြထားတာပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကတော့ autocad ကို သိပ်မကျွမ်းကျင် ပါဘူး . ၀ါသနာမပါလို့ မလေ့လာတာလဲ ပါတာပေါ့ . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ .စာအုပ်နှစ်အုပ်တင်ပေးထားပါတယ် ..
Book 1 >> ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Book2>> ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload